WAR LA SUGAYAY: Mohamed Salah Oo Markii Ugu Horreysay Toos Uga Hadlay Wixii Uu Ramos Kala Kulmay & Waxa Uu Ka Yidhi Kulanka Champions League | Laacibnet.net
HomeWararka Champions LeagueWAR LA SUGAYAY: Mohamed Salah Oo Markii Ugu Horreysay Toos Uga Hadlay Wixii Uu Ramos Kala Kulmay & Waxa Uu Ka Yidhi Kulanka Champions League
WAR LA SUGAYAY: Mohamed Salah Oo Markii Ugu Horreysay Toos Uga Hadlay Wixii Uu Ramos Kala Kulmay & Waxa Uu Ka Yidhi Kulanka Champions League
Xiddiga garabka weerar ee kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa shaaca ka qaaday inuu diirada saarayo kooxdiisa halkii uu ka fikiri lahaa Sergio Ramos kulanka siddeed dhammaadka UEFA Champions League ee ay Real Madrid kahor tagayaan.
Intii uu socday kulankii ugu dambeeyay ee dhex maray labada kooxood oo ahaa Final-kii Champions League ee 2018, Salah ayaa lagu qasbay inuu dhaawac ku baxo kaddib loolan adag oo uu kala kulmay kabtanka Real Madrid kaas oo keenay inuu garabka ka jabo.
Kahor is aragooda xiga ee toddobaadka dambe, Salah ayaa waraysi siiyay wargeyska ree Spain ee MARCA isagoo ka hadlay dhinacyo badan, halkan kaga boggo qaar kamida su’aalihii la weydiiyay Mohamed iyo jawaabihii uu bixiyay.
Su’aal: Maxaa ugu horreyn maskaxdaada kusoo dhacay markii aad aragtay kooxda ay Liverpool ku dhacday wareega siddeeda ee Champions League?
Jawaab: Waxaan ka fikiray sida ay u fiicnaan lahayd haddii aanu wareega afar dhammaadka gaadhno.
Su’aal: Miyaad doonaysay inaad Real Marid ku beegantaan wareegan?
Jawaab: Hagaag, maan lahayn tixraac gaar ah, waa wareega siddeed dhammaadka, maan danaynayn hal wao ama mid kale
Su’aal: Miyay inaad imika kahor tagto Real Madrid ka fiicantahay inaad Final-ka kaga hortagto?
Jawaab: Aniga muhiim iima aha, waxaanu joognaa siddeed dhammaadka Champions League, dhammaan kooxuhu waa heer sarre, kuwo aad u fiican.
Su’aal: Miyaad qabtaa dhiirigelin gaar ah oo aad kaga aargoosanayso kulankii Kiev?
Jawaab: Aynu kaliya nidhaahno inaan dhiirigelin gaar ah u qabo inaan kulanka guuleysto oo aan afar dhammaadka u gudbo, waxa hadda dhici doonaa ma bedelayo natiijadii Kiev ee Final-ka, taasi waa wax tagay.
Su’aal: Miyay jirtaa dhiirigelin gaar ah oo ah inaad Ramos kahor tagto markale?
Jawaab: (Wuu qoslay), Kulankaasi waa mid tagay, sidaas darteed anigu kama fikiro, waxaan ka fikirayaa kooxda, qofkasta waxa uu diirada saarayaa kooxdooda waxaana uu doonayaa inuu guuleysto.